Waxaa lagu aasaasay aaminsanaanta in Minnesota ay horumarto marka ay fannaaniinteedu horumaraan, barnaamijka farshaxanka iyo dhaqanka ee McKnight Foundation waa mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn uguna weyn dalka. Taageerada shaqsiyaadka fanaaniinta ah ee reer Minnesota ayaa aasaas u ahaa barnaamijka tan iyo markii la bilaabay 1982. Barnaamijka McKnight Artist Fellowships Barnaamijka wuxuu siiyaa abaalmarino lacageed sanadle ah oo aan xadidnayn fanaaniinta Minnesota ee xirfadda dhexe ee heer sare ah 14 farsamooyin hal abuur oo kala duwan. Ururada shuraakada ah ee barnaamijka ayaa maamula is weheshada waxayna u qaabeeyaan inay ka jawaabaan caqabadaha gaarka ah ee maaddooyinka kala duwan. Hadda aasaaska wuxuu ku biiriyaa qiyaastii $2.8 milyan sanadkiiba saaxiibbadiisa gobolka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo mcknight.org/artistfellowships.